လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ နှစ်ပင်လိမ်ခရိုရှေးထိုးနည်း ..
ကျွန်မ ... ဒီရက်ပိုင်းပေါ့လေ .. ရင်ထဲမှာ ပေါ့ပါးနေ...
သံယောဇဉ် ... တွယ်တာမှုတွေကြား .. ခံစားချက်မှုတွေ စုံ...
ကျွန်မဒီလိုနဲ့ပဲ ရွေ့ရုံလေးရွေ့တယ်ဆိုတဲ့ရထားပေါ်မှာလူပိခံရင်း ကျွန်မမျက်လုံးတွေပြာလာကာ အောက်ကခြေထောက်လည်း ဘယ်လိုမှ အခြေမခိုင်တော့ပါဖူး ..
ကျွန်မသတိလွှတ်လိုက်တာနဲ့ လူနင်းခံရလို့ သေမယ်ဆိုတဲ့ သတိလေးကပ်နေတာမို့ .. ရောက်တဲ့ဘူတာမှာဆင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် .. အိမ်နားကဘူတာကိုရောက်ဖို့ နှစ်ဘူတာအလိုမှာပါ .. ခြေတဖက်လည်း ထော့နင်းထော့နင်းဖြစ်နေပါပြီ .. လူလည်း ဘာမှမစားမသောက်ရတာမို့ .. အဓိကရေပါ .. တော်တော်လေး ခွေယိုင်ချင်နေပါပြီ .. ကျွန်မအိမ်ပြန်ရောက်မှဖြစ်မယ် .. ကျွန်မသတိကိုအသိနဲ့ကပ်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမို့ လမ်းထပ်လျှောက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ် .
ကျွန်မအိမ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ မျက်နှာသစ်တဲ့ဘေစင်အရောက်ကျွန်မမျက်နှာအခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေတာ အလန့်တကြားတွေ့လိုက်ရပါတယ် ..
ကျွန်မကို စိတ်ပူနေတဲ့လူတွေကို စိတ်မပူဖို့ သတင်းပို့ရဦးမယ် .. ကျွန်မနားလို့မဖြစ်သေးဖူး ... ကျွန်မကွန်ပျူတာကို ရှိစုမဲ့စု အားအင်နဲ့ဖွင့်ရင်း စိတ်ပူပြီးစောင့်နေတဲ့ အိမ်ကအကိုကိုလည်း သတင်းပို့ .. ချစ်သောကျူးပစ်တွေဆီလည်း သတင်းပို့ပြီး .. မေမေ့ကိုလည်း ကွန်ပျူတာကနေ ဖုန်းခေါ်လို့ရနေတာမို့ လှမ်းဆက် .. တခြားသောဂျပန်တွေသေနေကြတဲ့သတင်း .. အခြားအခြားရပ်ကွက်ကလည်း အခြေအနေတွေဆိုးနေတဲ့သတင်းကိုနားထောင်ရင်း အဆက်အသွယ်မရသေးသူတွေကို လိုက်ဆက်သွယ်ရပြန်ပါတယ် .. ကျွန်မရဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးဆီက အဆက်အသွယ်ရကာမှပဲ ကျွန်မစိတ်အေးရပါတယ် ..
ကျွန်မ လှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်မအခန်းက အရမ်းကိုအေးစက်နေတာတခုလောက်ပဲသတိထားမိပြီး လောကကြီးနဲ့အဆက်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ် .. အဲ့ဒီချိန်မှာမနက်၃နာရီပါ . ကျွန်မရုတ်တရက်သတိပြန်ကပ်လာပြီး .. ခနတဖြုတ်လောက်အိပ်လိုက်ရတာလည်းပါပါ့မယ် .. ကျွန်မကိုလေတွေတိုးနေတာသတိထားမိတဲ့အချိန်နာရီကြည့်လိုက်တော့ မနက်၆နာရီပါ .. ကျွန်မသတိတရနဲ့ထကြည့်မိမှပဲ ခေါင်းရင်းတည့်တည့်မှာ တံခါးနှစ်ချပ်လုံး ပွင့်နေခဲ့ပါတယ် .. မြတ်စွာဘုရား .. လေအေးတွေထဲကျွန်မတညလုံး အိပ်ပျော်နေခဲ့တာပါလား ... အဲ့ဒါနဲ့ပျက်နေတဲ့တခါးကိုထလုပ်ပြီး ကျွန်မဆေးသောက်လို့ နောက်တခေါက်ပြန်အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ် .. နိုးလာတော့ ကျွန်မကိုယ်တွေခြစ်ခြစ်တောက်ပူလို့ ...
Posted by မီးငယ် at 11:53 AM
ဖတ်ရတာ အစ်မနဲ့ အတူ စိတ်မောရပါတယ်
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါခင်ဗျာ။ အခုလို စာတွေ့တော့ ၀မ်းသာပါတယ်။